भारतीय टिभी एंकरले भाषण दिएपछि मीनेन्द्रको जवाफः नेपालमा यसरी अन्तर्वार्ता लिइँदैन
Thursday, 21 May, 2020 11:11 AM
८ जेठ, काठमाडौं । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतीय मिडिया नेपालमाथि तल्लोस्तरमा खनिएका छन्। उनीहरू बुधबार दिनभर अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको ट्वीटलाई लिएर तुच्छ गालीमा उत्रिए । मनिषाले नेपालको नयाँ नक्साको खुलेर समर्थन गरेकी थिइन्। एबिपी च्यानलले मनिषालाई ‘भारतको खाएर, चीनको गीत गाएको’ भन्दै आरोप लगायो ।
बुधबार साँझ भारतको अर्को न्यूज च्यालन रिपब्लिकले सर्कस देखायो । उसले नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, नेपाली अंग्रेजी पत्रिका रिपब्लिकाका सम्पादक सुवास घिमिरे र दी हिमालयन टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमाललाई केही भारतीय अतिथिसँगै आमन्त्रण गर्यो । कार्यक्रमको सञ्चालक थिए, ‘सत्तापक्षीय पत्रकार’ अर्णव गोस्वामी । उनको कार्यक्रमको शीर्षक थियो– ‘चाइना युजेज नेपाल’, अर्थात् चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्छ।
अर्णवले सुरूमै भने, ‘चीन कसैको साथी हैन।’ त्यसपछि लम्बेतान लेक्चर दिन थाले । उनको आशय थियो– नेपालले चीनको इशारामा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। उनले आफ्नो भाषण नरोकेपछि मीनेन्द्रले बीचमै भने, ‘अर्णव, तपाईंले प्रश्न गरेको कि कुनै मन्तव्य दिएको हो ? कि मलाई कुनै सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? नेपालमा यसरी अन्तर्वार्ता लिइँदैन।’
नेता रिजालले अगाडी भने, ‘नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। हामी द्विपक्षीय छलफलबाट समस्या हल गर्न चाहन्छौं। भारतले कोभिड–१९ को महामारी टुंगिएपछि बसौंला भन्यो। हामीले अगावै कुराकानी गरौं भन्यौं । हामीसँग उक्त भूभाग हाम्रो भएको पुष्टि गर्न यथेष्ट प्रमाण छन्। भारतले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रमाण जुटाओस्। वार्तामा बसौं, समस्या समाधान गरौं। चीनलाई जोडिरहनुको तुक छैन।’
त्यसपछि जवाफमा अर्णवले भने, ‘नेपालमा कसरी अन्तर्वार्ता गरिन्छ मलाई थाहा छैन, भारतमा यसरी नै गरिन्छ।’
मीनेन्द्रको राम्रै जवाफ पाएका अर्णय यति भनेपछि भने बहस मोड्नतिर लागे । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोकेको प्रसंग कोट्याउँदै भने, ‘चीनको कोरोना भाइरसभन्दा भारतबाट आएको भाइरस कडा ? तपाईंको प्रधानमन्त्रीको कस्तो बहुलठ्ठीपूर्ण तर्क ? कस्तो अवैज्ञानिक कुरा ?’
नेता रिजालले जवाफ फर्काए, ‘म सीमा सम्बन्धमा सरकारले लिएको अडानको समर्थन गर्छु। कोरोनाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले के भने के भनेनन्, मेरो सरोकारको विषय होइन।’ अर्णवले नेपालको पछिल्लो कदममा चीनको हात रहेको पुष्टि गर्न खोजिराखे भने रिजालले अस्वीकार गरिराखे।
रिपब्लिकाका सम्पादक सुवास घिमिरेले सुगौली सन्धिपछिका नक्साहरूले उक्त भूभाग नेपालको भएको पुष्टि गर्ने बताए। त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालक अर्णव सम्पादक घिमिरेमाथि खनिए। भने, ‘हामी तपाईंसँग हाम्रो भूभागबारे छलफल गर्दैछैनौं। यसरी त भोलि तपाईंले मुम्बई हाम्रो हो भन्नुहोला, दिल्ली हाम्रो हो भन्नुहोला ? कसरी हुन्छ ?’
दी हिमालयन टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालसँग पनि अर्णवले चीनसँगकै सम्बन्ध कोट्याएर छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमाथि नै घृणा फैलाउने दुचेष्टा गरे । उनले भने, ‘चिनियाँहरू नेपालीलाई रुचाउँदैनन्, घृणा गर्छन्। नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेका छन्, सरकारी वेवसाइट ह्याक गरेका छन्। ती तपाईंका साथी हैनन् । चिनियाँहरू कसैको मित्र हुन सक्दैनन्। भारतसँगको पुरानो सम्बन्ध बिगारेर तपाईंहरूले के पाउनुहुन्छ ?’
तर, जवाफमा प्रकाशले पनि अर्णवलाई निराश पारे। भने, ‘नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको हैन, कुरा गोलमटोल नपार्नुस्। नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद छ भन्ने कुरा भारत सरकारले नै स्वीकार्दै आएको छ।’ त्यसपछि, अर्णवले ‘चीन कसैको मित्र हुन नसक्ने’ जिरह गर्दै बहस टुंग्याए।
⇒ भिडियो हेर्नुहोस्